Vaovao - Ny tsenan-labiera fanaovana asa-tanana eo ambanin'ny valan'aretina sy ny fanoherana nalain'ny orinasanay
Nanomboka tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity dia nirongatra ny valan'aretina ary nakatona ny toeram-pivarotana, bara, trano fisakafoanana ary toeram-bahoaka. Hatreto dia naharitra efa ho antsasaky ny taona ny valanaretina, izay nitarika ny fihemoran'ny toekarena manerantany ary tsy an'asa maro be; Ho fanampin'ny tsena iraisam-pirenena hafa dia tsy be fanantenana noho ny antony iraisam-pirenena; Noho ny fiparitahan'ny valanaretina, bara, trano fisakafoanana, labiera maro, sns. No nijanona sns. Ny fatiantoka mivantana nateraky ny indostrian'ny labiera dia tsy azo refesina; izany dia nanjary fiakarana tampoka amin'ny varotra kojakoja labiera asa-tanana. Mba hampihenana ny fiantraikan'ny valanaretina, ny orinasanay dia manavao andiana fepetra, toy izao manaraka izao:
1. Fanavaozana ny vokatra hanatsarana ny kalitaon'ny fitaovana labiera sy ny sanda ampiana fitaovana; ny injenieranay dia mampihatra ny takian'ny mpanjifa amin'ny fanaovana fitaovana fanamboarana labiera, mba hanana traikefa tsara kokoa ny mpanjifa;
2. Alamino indray ny tranokala ary asehoy ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa;
3. Ampiofano ireo injenieranay aorinan'ny varotra hanompoany tsara kokoa ny mpanjifa;
4. Ahena ny vidin'ny fitaovana hivarotana fanohanana ho an'ny mpanjifa misimisy kokoa hanombohana asa fandraharahana labiera haingana araka izay tratra, ary hampihena ny vidin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra;
5. Hatsarao ny rafitra anatiny ao amin'ny orinasa;
Manantena izahay fa hihatsara kokoa ary hanompo mpanjifa bebe kokoa;
Raha ara-pahasalamana dia voaporofo fa ny fisotroana antonony dia afaka mitondra tena fahasalamana amin'ny vatan'olombelona. Huaian dia mampihena ny kolesterola, manamafy ny faharanitan-tsaina ary manentana ny aingam-panahy. Raha olon-dehibe Zhang izay efa nahatratra ny taonan'ny fisotroana ara-dalàna ary tia mankafy divay Pinot Noir iray vera isan-kariva, dia tokony ho azon'i Zhang ny mankasitraka ny fiatraikany hafahafa amin'ny fisotroana antonony. Na izany aza, raha tia misotro toaka i Zhang, dia mety tsy hanana fotoana hisotroana tsara i Zhang. Andao hojerentsika ny tombony azo avy amin'ny fisotroana antonony amin'ny vatan'olombelona. Akademia labiera aziatika Dumens.
Ny fampandrosoana tsy tapaka ny teknolojia fanaovana labiera maoderina dia manome fahafaha-manao betsaka kokoa hanomezana fahafaham-po ny tsiro isan-karazany sy ny fepetra tsy mendrika ataon'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fihalalina sy ny fampandrosoana ny fanavaozana ary ny fisokafany, dia niditra haingana tao amin'ny tsenan'ny tanànan'i Chen Mou ny labiera mainty miaraka amina firazanana iraisana, ary nanjary fironana hialan'ny olona amin'ny fiainana maoderina.